UDebhora Wayeyindoda Ehlakaniphile neyibindi yakwaSirayeli
UMgwebi weMfazana weBhayibhile yesiHebhere, uMlawuli wezeMpi, iNduna, uMprofeti
UDeborah uhamba phakathi kweentombi ezidumileyo zeBhayibhile zesiHebhere, ezaziwa ngamaKristu njengeTestamente Elidala. Awaziwa ngokuhlakanipha kwakhe, uDebora wayeyaziwa ngokuba nesibindi. Nguye kuphela umfazi weBhayibhile yesiHebhere owaziwayo ngokuzimela, kungekhona ngenxa yobuhlobo bakhe nendoda.
Wayemangalisa ngokwenene: ijaji, umkhosi wezempi, umbongi, kunye nomprofeti. UDeborah wayengomnye wabasetyhini abane abakhethiweyo njengomprofeti kwiBhayibhile yesiHebhere, kwaye ngoko kunjalo, kuthiwa udlulisele ilizwi kunye nentando kaThixo.
Nangona uDebhora wayengengumfundisikazi ozinikeleyo, wayekhokela inkonzo yonqulo kawonkewonke.
Iinkcukacha ezifutshane malunga noBomi bukaDebora
UDebhora wayengomnye wabathetheli bamaSirayeli phambi kobukhosi bokuqala obuqala ngoSawule (malunga ne-1047 BCE). Aba babusi babibizwa ngokuba yi- mishpat - " abagwebi ," - iofisi eyayilandela emva xa uMoses wamisela abancedisi ukumnceda ukuxazulula iingxabano phakathi kwamaHebhere (Eksodus 18). Umkhwa wabo wawufuna ukukhokelwa nguThixo ngomthandazo nokucamngca ngaphambi kokwenza isigqibo. Ngenxa yoko, abaninzi abagwebi nabo babecinga ukuba ngabaprofeti abathetha "ilizwi elivela eNkosini."
UDebora wayehlala kwindawo ethile malunga ne-1150 BCE, malunga nenkulungwane okanye emva kokuba amaHebhere angene eKanan. Ibali lakhe lichazwe kwiNcwadi yabaGwebi, iSahluko 4 no-5. Ngokutsho kombhali uJoseph Telushkin kwincwadi yakhe ethi Jewish Literacy , into eyaziwayo ngobomi babucala bukaDebhora yayinguye indoda yakhe, iLapidot (okanye iLappidoth).
Akukho nto ibonisa ukuba ngabazali bakaDebora babani, yintoni uhlobo lomsebenzi wase Lapidot, nokuba ngaba babenabantwana.
Abanye abaphengululi beBhayibhile (bona i-Skidmore-Hess kunye no-Skidmore-Hess) bacacise ukuba "lappidot" yayingekho igama lomyeni kaDebhora kodwa kunokuba igama elithi "eshet lappidot" lithetha "umfazi wesibane" ngokubhekiselele, okubhekiselele kwimoya yomlilo kaDebora.
UDebora ufumana izigwebo phantsi kwesiPlanga
Ngelishwa, iinkcukacha zexesha lakhe njengejaji lamaHebhere ziphantse zincinci njengeenkcukacha zakhe. Izahluleli 4: 4-5 zivula oku:
Ngelo xesha uDebhora, umprofetikazi, umfazi kaLappidoth, wayegweba amaSirayeli. Wayehlala phantsi kwentendelezo kaDebhora phakathi kweRama neBheteli entabeni yakwaEfrayim; Kwaye amaSirayeli eza kuye ukuze amgwebe.
Le ndawo, "phakathi kweRama neBheteli kwintaba yakwaEfrayim," ubeka uDebora kunye namanye amaHebhere kwindawo eyayilawulwa nguKumkani uYabhin waseHazori, owayesicinezele amaSirayeli iminyaka engama-20, ngokweBhayibhile. Ukubhekisela kuYabhin waseHazori kudideka kuba iNcwadi kaYoshuwa ithi uYoshuwa wasinqoba iYabhin waza watshisa iHasori, enye yeedolophu zaseKhanani eziphambili, phantsi kwekhulu leminyaka ngaphambili. Iingcamango ezininzi ziye zafakwa ukuze zizame ukusombulula le nkcukacha, kodwa akukho nto iyanelisekile ngoku. Inkolelo eqhelekileyo kukuba u-Deborah uKumkani uJabin wayeyinzala ka-Yoshuwa intshaba eyatshutshiswayo kwaye uHazori yayikwakhiwa kwakhona ngexesha lokungenelela iminyaka.
UDeborah: Iqhawekazi kunye noMgwebi
Emva kokufumana umyalelo ovela kuThixo, uDebhora wabiza umkhosi wamaSirayeli ogama linguBharaki.
UBharaki wayengumlondolozi kaDebhora, owesibili-umyalelo-igama lakhe lithetha umbane kodwa akayi kubetha aze ahluthe amandla kaDebora. Wamxelela ukuba athathe amawaka ayi-10 000 ukuya kwiNtaba yeTabor ukuze alwe noJabin, uSisera, owayekhokela umkhosi owenziwe ngeenqwelo zamahashe eziyi-900.
I-Library yaseNkcazo yamaYuda ibonisa ukuba impendulo kaBharaki kuDebora "ibonisa ukuba uhlonishwa kakhulu lo mprofetikazi wasendulo." Abanye abatoliki bathetha ukuba impendulo kaBaraki ibonisa ukuba ayizange ihlaziye xa eyalwe ekulweni ngumfazi, nokuba ngaba wayengumgwebi olawulayo ngelo xesha. UBharaki wathi: "Ukuba uya kuhamba nami, ndiya kuhamba; ukuba andiyi kuhamba" (Abagwebi 4: 8). Kwindinyana elandelayo, uDebhora wavuma ukuya ekulweni kunye nemikhosi kodwa wathi kuye: "Noko ke, akuyi kubakho uzuko kwindlela othabathayo, kuba iNkosi iya kuhlangula uSisera ezandleni zowesifazane" ( Abagwebi 4: 9).
U-Hazori, uSisera, waphendula kwiindaba zokuvukela kwamaSirayeli ngokuzisa inqwelo yakhe yentsimbi kwiNtaba yeTabor. I-Library ye-Jewish Virtual ixela inkolelo yokuba le nto imfazwe eqinile yenzeke ngexesha lezimvula ukususela ngo-Oktobha ukuya kuDisemba, nangona kungekho niselo ekhoyo kwisibhalo. Iingcamango kukuba imvula ikhiqize udaka ombethe iinqwelo zikaSisera. Ingaba le ngqungquthela yinyani okanye ayikho, nguDebhora owacebisa uBharaki xa efika uSisera kunye namadoda akhe (Abagwebi 4:14).
Isiprofeto SikaDebhora NgoSisera Siya Kuyinyaniso
Amaqhawe amaSirayeli aphumelela ngaloo mini, kwaye uSisera uSisera wabaleka kwindawo yokulwa ngeenyawo. Wayebalekela kwinkampu yamaKeni, isizwe saseBedouin esilandela ifa layo kuYetro, umkhwe kaMoses. USisera wabuza indawo engcwele ententeni kaYayeli (okanye uYayeli), umfazi wenkwenkwezi yezindlu. Eyesithathu, wacela amanzi, kodwa wamnika ubisi kunye nezilonda, isidlo esinzima esasenza walala. Ukuthatha ithuba lakhe, uJael waphosela ententeni waza waqhubela intente kwintloko kaSisera ene-mallet. Ngaloo ndlela u-Jaweli wathola udumo ngokubulala uSisera, okwakunciphisa udumo lukaBharaki ukuze anqobe umkhosi waseKabin, njengoDeborah.
Abagwebi Isahluko 5 siyaziwa ngokuba yi "Ingoma kaDebhora," isicatshulwa esinokubakhoyisa amaKanan. Isibindi sikaDebora kunye nobulumko ngokubamba umkhosi ukuphula ulawulo lweHazori kwanika amaSirayeli iminyaka engama-40 yoxolo.
> Ackerman S. 2003. Ukumba uDeborah: IBhayibhile yeBhayibhile yesiNgesi yakwiSiginal kunye negalelo leArchaeology. Kufuphi ne-Eastern Archaeology 66 (4): 172-184.
> I-Library ye-Virtual Library, http://www.jewishvirtuallibrary.org
> Ukufunda nokuBhala kwamaYuda ngoJoseph Telushkin (uWilliam Morrow noCh, ngo-1991)
> I-Oxford Annotated Bible kunye ne-Apocrypha , iNew Revised Standard Version , (i-Oxford University Press 1994). I-NRSV i-copyright ye-1989 yiCandelo Lemfundo YamaKristu yeBhunga likaZwelonke leeCawa lika-Kristu e-United States of America. Se tyenziswe imvume. Onke Amalungelo Agciniwe
> Skidmore-Hess D, kunye no-Skidmore-Hess C. 2012. Ukukhupha umfazi okhuni: Ukunciphisa umprofetikazi uDeborah. Shofar 31 (1): 1-17.
Iingoma kunye noBulumko Iincwadi zeBhayibhile
Uvuko LukaYesu kunye neTibhi engenanto (Marko 16: 1-8)
Iiminyaniso zeBhayibhile zokuzixolela
Abantu Bavuka Kwabafileyo eBhayibhileni
Iindaba ezimnandi malunga 'neNtshontsho kunye neNtshonalanga' uJoshua Morrow
Amanqaku amakhulu amaPiano Triad
Uninzi lweNdebe yeStanley iLungu leQela
I-DILF, i-DELF, kunye ne-DALF yoLwazi lweZakhono zaseFransi
I-Qur'an ithi ntoni ngoMariya, unina kaYesu?
IAlcadia University Admissions
Vula umbuzo ojikelezayo
Ixesha lokugqibela iPinta Island Tortoise
Indlela iJografi ifaka ngayo i-Weather Weather yase-United States
Amagqwetha oPhulo lobuGcisa -Ukhusela iiNgcono ezintsha
I-Free Free yamaKristu / iVangeli IiNgqungquthela kwiWebhu
Inyaniso malunga ne-ABEC Skateboard Bearings
Ngaba Yinyaniso YeBhayibhile okanye IBhayibhile?
Yintoni i-GPA enzima?
Njengokuba Ngaphezulu Ngaphantsi kweNtshukumo yeMvelaphi kunye neMvelaphi
Iibhonkco: Isicwangciso sePil-Up in Rhetoric
Abaselula kunye namaTween kwiMculo yobuKristu
Iyintoni iSchool School? Abakhandi beZakhiwo
Indlela yokwenza uMlilo oBomvu